China Cationic polyester spandex mélange warshadaha dharka iyo alaab-qeybiyeyaasha |Huasheng
Laba jid kala bixi.Taabasho jilicsanDildilaaca Mélange
Qoyaanka Wicking, Ka-hortagga bakteeriyada/Ka-hortagga-microbial, qaboojinta, dib loo warshadeeyay
Dharkan shaadhka ah ee polyester spandex melange, maqaalkayagu lambarkiisu yahay FTT-WB180, waxa lagu toleeyey 9% spandex (elastane), 62% polyester iyo 19% cationic.
Dharka shaadhka ee cationic polyester spandex mélange waxa lagu xidhxidhay fibbooyin isku dhafan kuwaas oo la midabeeyay si ay u abuuraan saamayn kulul.Dharka funaanadda melange wuxuu leeyahay habab badan oo cawl ama cawl leh midab kale.Waxaa jira midabyo heather oo soo socda oo diyaar u ah dharka funaanadda mélange xilligan.
Busug/buluug, Pink/Fuchsia kulul, Turquoise/Royal, Rose/Bunuun,
Cawl/Madow, Khamri/Madow, Purple/Madaw, Coral/Madaw, iyo Denim/Madaw
Daawooyinka sida qoyaanka qoyaanka, anti-microbial iyo qaboojinta ayaa diyaar ah.Oo waxaan u isticmaali karnaa marada polyester-ka dib loo warshadeeyay ee maradaan melange si aan si fiican u ilaalino dhulka.
Dharkan shaadhka ah ee polyester spandex melange ee cationic wuxuu aad ugu fiican yahay leggings, kululeeyaha lugaha, surwaalka gaaban ee isboortiga, nigisyada, koofiyadaha isboortiga.Waxay ka fogaynaysaa qoyaanka jidhka waxayna ka hortagtaa nuugista urta.Dharkan mélange-ga ayaa ka ilaalin doona qallayl iyo ur la'aan inta lagu jiro dhaqdhaqaaqa jireed ee qofka xidhan.Aad bay u raaxo badan tahay in la xidho.
Si loo daboolo heerarka tayada adag ee macaamiisha, dharka funaanadaha mélange-ga waxaa soo saaray mashiinnadayada wareegyada casriga ah ee casriga ah ee laga keenay Yurub.Mashiinka tolida ee xaalad wanaagsan ayaa hubin doona tolida wanaagsan, fidsan wanaagsan, iyo muuqaal cad.Shaqaalaheenna khibradda leh ayaa si wanaagsan u daryeeli doona dharka funaanadaha mélange-ga laga bilaabo greige ilaa mid dhammaystiran.Soo saarista dhammaan dharka funaanadaha melange waxay raaci doontaa habab adag si loo qanciyo macaamiisheena ixtiraamka leh.
Huasheng waxay qabataa fiilooyinka tayada sare leh si loo hubiyo waxqabadka iyo tayada dharkayada fidsan ee mélange ka sarreeya heerarka warshadaha caalamiga ah.
Xakamaynta tayada adag si loo hubiyo in heerka isticmaalka dharka fidsan ee melange uu ka weyn yahay 95%.
Huasheng waxa ay soo saartaa taxane cusub oo ah dhar fidsan mélange bishiiba.
Huasheng waxay rabta inay sii waddo abuurista qiimaha ugu sarreeya ee macaamiisha.Kaliya ma siino macaamiisheena maro fidsan mélange, laakiin sidoo kale waxaan siinaa adeeg iyo xal aad u fiican.
Iyada oo leh 16 sano oo waayo-aragnimo ah dharka funaanadaha fidsan, Huasheng waxay si xirfad leh ugu adeegtay 40 waddan oo macaamiisha ah oo adduunka oo dhan ah.
Hore: Dharka fidsan ee Heather Jersey waxay ku xidhatay melange
Xiga: Mélange waa la cadayday dharka Jersey
Dharka buluuga ah ee Melange
Dharka Gray Melange
Dharka Heather Melange
Fabric Melange Grey Fudud
Dharka Saamaynta Melange
Dharka Melange Jersey
Mélange waa la cadayday dharka Jersey
Melange polyester spandex fidsan j...
Polyester iyo spandex qaboojinta funaanadda melange
Polyester Spandex funaanad si degdeg ah u engegan...
Nylon polyester iyo spandex melang fidsan sare...